Toro lakilasy telo hampiasana ny atiny | Martech Zone
Toro lakilasy telo hampiasana ny atiny
Alarobia, Febroary 25, 2009 Alahady, May 29, 2016 Douglas Karr
Mpivarotra maro no mampiasa teknolojia iray izay ankafizin'izy ireo na ahazoany aina ary tsy miraharaha ny hafa. Mpanohana goavana ny automatisation aho ary ny marketer dia manararaotra ny fandefasan-kafatra amin'ny fomba, endrika, na endrika - na dia tsy manisy ratsy ny ezak'izy ireo amin'ny varotra aza.
Mikasika ny orinasa iray manararaotra atiny amin'ny alàlan'ny tranokalany, lahatsoratra, whitepapers, fandinihana tranga na bilaogin'orinasa misy azy, mino aho fa misy lakilasy telo hahatonga ny atiny hiasa amin'ny orinasanao na ny marikao:
Aza adino - tohizo hatrany ny tanjona kendrenao ary, na toy inona na toy inona alaim-panahy, andramo antoka fa miresaka amin'ny mpanjifanao na ny fahatsinjovanao foana ianao. Ity dia hahazo fahefana sy laza mafy orina haingana kokoa noho ianao raha mandingana na miovaova amin'ny hafatrao.
Ampahafantaro foana - misy ny vinavinan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa maniry ny atiny, nefa tsy fantany hoe misy izany. Mandefasa lahatsoratra amin'ny serivisy hafa, fanambarana an-gazety, apetraho anaty rohy ny lahatahiry, ampidiro amin'ny resaka amin'ny forum mifandraika amin'izany, ampahafantaro ny lahatsoratrao amin'ny alàlan'ny fitaovana fanamarihana ara-tsosialy, alefaso amin'ny tranokalam-baovao, wiki sns. amin'ny atiny. Manampia rohy amin'ireo faktioranao, ny sonia mailakao, ny karatry ny orinasao… na aiza na aiza!
Syndicate Na aiza na aiza - Saika ny fisoratana anarana amin'ny haino aman-jery sosialy dia misy endriny rehetra amin'ny famoahana ny fahana RSS amin'ny serivisin'izy ireo. Ampiasao ny tsirairay! Betsaka ny olona mampiasa tambajotra tokana ary tsy mania mihitsy, miantoka ny atiny misy azy ireo no tadiavin'izy ireo! Avoahy ao amin'ny TwitterKoa!
Napetrakao tamin'ny asa mafy ianao ary nanoratra atiny mifandraika amin'izany. Miasà izao mba hahazoana antoka fa ny atiny dia mahazo ny sainy mendrika!
Tags: syndication atinyhanambara ampahibemasoampahafantaro ny atinyianarantsika avyatiny mifandraikamijanona ho mifandraikaSyndication
Ahoana ny fomba hanapahana ny fifamoivoizan'ny bilaoginao amin'ny antsasaky
Lahatsary: ​​Ahoana ny famoahana ny bilaoginao ao amin'ny Twitter
Febroary 25, 2009 amin'ny 8:26 PM
Torohevitra tena tsara.
Ny bala ambony anao: Ny maha-zava-dehibe ny zava-dehibe
Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja ihany koa dia ny fametrahana paikady. Ohatra amin'izany ny paikadintsika manokana:
- Mifandraisa amin'ireo mpivarotra media sosialy izay miresaka momba ny paikady, ny toerana, ny maha-zava-dehibe ary ny fiantraikany
- vakio daholo izay navoakan'ireo mpikatroka ambony indrindra (Brogan, Owyang…)
- mandray anjara amin'ny majika afovoany (olona manana fiantraikany lehibe ary tena mahay momba ny lohahevitra).
Nolazaiko tamin'ny antsipiriany bebe kokoa ny fizotranay manokana eto: http://blog.ecairn.com/2009/02/18/fighting-social-media-fear/
Ny fanehoan-kevitra dia raisina am-pitiavana.